အမှိုက်ရှင်းတမ်း - Thutazone
By ThutammPosted on December 15, 2017
Written By ဦးတိုးအောင်
” အမှိုက်ဆိုတာ အမှိုက်မဟုတ်ပါဘူး…
သူရှိသင့်တဲ့နေရာမှာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာ အမှိုက်ဖြစ်ရတာပါ…”
” အမှိုက်ဆိုတာ အမှိုက်မဟုတ်ပါဘူး….
သူနဲ့သင့်တော်တဲ့နေရာ မရောက်သေးလို့သာ အမှိုက်ဖြစ်ရတာပါ…”
ကျွန်တော့်အသိဆရာဝန်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲနေတယ်။ ဘာသာရေးလည်းလိုက်စားတယ်။ သူကဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ခဲတယ်။ ပုဆိုးကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဝတ်လေ့ရှိတယ်။ သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရင် သူ့ဆေးခန်းမှာ လူနာတွေနဲ့မဟုတ်ရင်ဖုန်း တစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်တယ်။သူ့ကို အသိမိတ်ဆွေတွေက ဘိလိယက်ထိုးဖို့ခေါ်တယ်။သူမလိုက်ဘူး။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ခေါ်တော့ အခွေထွက်မှ အိမ်မှာကြည့်မယ်တဲ့။ ကာရာအိုကေသွားဖို့ခေါ်ပြန်တော့ မအားဘူး၊ဆေးခန်းစောင့်ရဦးမယ်လို့ပြောတယ်။ ကြာတော့ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ဆီမလာကြတော့ဘူး။သူကတော့ နေ့တစ်နေ့တာကို ဆေးခန်း၊လူနာ၊ဖုန်းနဲ့ဖြတ်သန်းနေတယ်။
တစ်နေ့…လူနာရှင်းချိန် သူ့ဆီရောက်သွားတော့ သူနဲ့ စကားများများ ပြောဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်က
” ဆရာ့သူငယ်ချင်းတွေ ဆရာ့ဆီမလာကြတော့ဘူးမလား…”
” ဆရာက ဆရာ့လူနာတွေပဲ အချိန်ပေးနေတာကိုး…ဆရာ့အသိ
” တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုစွန့်လွှတ်ရမှာပေါ့ကွာ…ငါလုပ်တဲ့အလုပ်က ငါ့အတွက်ရော အများအတွက်ပါအကျိုးရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
ဆရာ့စကားတွေက မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်။ဆရာက ဆက်ပြောသေးတယ်။
” ငါက ဆရာဝန်တစ်ယောက်လေကွာ…ဆရာဝန်က ဆေးခန်းနဲ့လူနာ၊လူနာနဲ့ဆေးခန်းကို ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာ မဆန်းပါဘူး….ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကာရာအိုကေဆိုင် သွားလိုက်၊ ဘိလိယက်ခုံသွားလိုက်၊ ရုပ်ရှင်ရုံသွားလိုက်၊ အနှိပ်ခန်း
သွားလိုက်လုပ်နေရင် ငါက အမှိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့…အမှိုက်ဆိုတာ သူများတွေ စွန့်ပစ်တဲ့ အရာတစ်ခု၊အသုံးမဝင်တဲ့ အရာတစ်ခု၊တန်ဖိုးမရှိတဲ့ အရာတစ်ခု…ဒါပေမယ့် အမှိုက်ဆိုတာ တကယ်တော့ အမှိုက်မဟုတ်ဘူး…ရှိသင့်တဲ့နေရာမှာမရှိပဲ နေရာလွဲနေလို့သာ အမှိုက်လို့ အခေါ်ခံရတာ…”
” ဒီလိုလေကွာ…မင်း သနပ်ခါးလိမ်းဖူးလား…”
” သနပ်ခါးက ပါးပေါ်မှာလိမ်းတာနော်…”
” ဟုတ်တယ်လေဆရာ…တစ်ချို့မိဘတွေကတော့ သူ့ကလေးကို တစ်ကိုယ်လုံးလိမ်းပေးကြတယ်…”
” အင်း…ကောင်းပြီ…သနပ်ခါးကို ပါးမှာလိမ်းတယ် ကိုယ်မှာလိမ်းတယ်…ဆံပင်မှာကော လိမ်းလို့ရလား…”
” ကြံကြီးစည်ရာ ဆရာရယ်…သနပ်ခါးကိုဆံပင်မှာလိမ်းလို့ဘယ်ရမလဲ ဆရာရဲ့…မျက်နှာကိုသနပ်ခါးလိမ်းလို့ ဆံပင်ကိုသနပ်ခါးပေသွားရင်တောင်သုပ်ပစ်ကြတာပဲကို….”
” အဲဒါပြောတာ…သနပ်ခါးက သူ့နေရာမဟုတ်တဲ့ ဆံပင်ပေါ် ရောက်သွားရင် အမှိုက်အနေနဲ့ သုပ်ပစ်ခံရရော…ဒီလိုပဲ ခေါင်းလိမ်းဆီလည်း ဆံပင်မှာမနေပဲ မျက်နှာမှာ နေရင် အမှိုက်အနေနဲ့ သုပ်ပစ်ခံရမှာပဲ…”
” ဪ…ဒီလိုလား…ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီ…ဆရာ့အတွေး အရမ်းကောင်းတာပဲ…”
ကျွန်တော် ချီးကျူးလိုက်တယ်။သူတစ်ပါးကို အပြစ်ကိုထောက်ပြတော့ မည်ဆို လျှင်၊သားသမီးကိုဆုံးမတော့မည်ဆိုလျှင် နှစ်ယောက်တည်း
ရှိတဲ့အချိန်မှပြောသင့်တယ်။သူတစ်ပါး သို့မဟုတ် သားသမီးကို ချီးမွှမ်း တော့မည်ဆိုလျှင် လူပုံအလယ်မှာ ချီးမွှမ်းရမယ်လို့ မှတ်သားဖူးတယ်။
” ဒါနဲ့…ပြောရဦးမယ်…လူတွေစွန့်ပစ်နေတဲ့၊ဘာမှအသုံး မဝင်တဲ့အမှိုက်လည်း နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုမှာ နေရာတစ်ခုရသွားပြီ၊တန်ဖိုးရှိသွားပြီ….”
” ဘယ်လို ဆရာ…”
ဆရာ့ရဲ့ ဒဿနဆန်တဲ့စကားတွေကို နားမလည်စွာနဲ့ ပြန်မေးမိတယ်။
” အခု လူတွေစွန့်ပစ်နေတဲ့ အမှိုက်ကနေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်နိုင်ပြီလေကွာ…ဒါ အမှိုက်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ကွ…ဒီတော့လေကွာ…
လောကမှာ အမှိုက်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး…နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုမှာ အမှိုက်ဟာ လောင်စာအဖြစ် တန်ဖိုးရှိသွားပြီ…လူ့အကျိုးပြုလောင်စာအဖြစ်
ဆရာ့ရဲ့ စကားလုံးတွေကို တစ်ဘဝလုံး၊တစ်သက်လုံး၊မသေမချင်း အသုံးပြုသွားရမယ့် အတွေးအခေါ်အတွက် ငတ်မွတ်စွာ စားသုံးခဲ့တယ်။
” တကယ်တော့ အမှိုက်ဆိုတာ အမှိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ…”
Written By ဦးတိုးအောငျ
” အမှိုကျဆိုတာ အမှိုကျမဟုတျပါဘူး…
သူရှိသငျ့တဲ့နရောမှာ မရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့သာ အမှိုကျဖွဈရတာပါ…”
” အမှိုကျဆိုတာ အမှိုကျမဟုတျပါဘူး….
သူနဲ့သငျ့တျောတဲ့နရော မရောကျသေးလို့သာ အမှိုကျဖွဈရတာပါ…”
ကြှနျတေျာ့အသိဆရာဝနျတဈယောကျရှိတယျ။ သူကရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲနတေယျ။ ဘာသာရေးလညျးလိုကျစားတယျ။ သူကဘောငျးဘီရှညျဝတျခဲတယျ။ ပုဆိုးကိုစှဲစှဲမွဲမွဲဝတျလရှေိ့တယျ။ သူ့ကိုတှလေို့ကျရငျ သူ့ဆေးခနျးမှာ လူနာတှနေဲ့မဟုတျရငျဖုနျး တဈလုံးနဲ့ အလုပျရှုပျနတေတျတယျ။သူ့ကို အသိမိတျဆှတှေကေ ဘိလိယကျထိုးဖို့ချေါတယျ။သူမလိုကျဘူး။ ရုပျရှငျကွညျ့ဖို့ချေါတော့ အခှထှေကျမှ အိမျမှာကွညျ့မယျတဲ့။ ကာရာအိုကသှေားဖို့ချေါပွနျတော့ မအားဘူး၊ဆေးခနျးစောငျ့ရဦးမယျလို့ပွောတယျ။ ကွာတော့ သူငယျခငျြးတှကေ သူ့ဆီမလာကွတော့ဘူး။သူကတော့ နတေ့ဈနတေ့ာကို ဆေးခနျး၊လူနာ၊ဖုနျးနဲ့ဖွတျသနျးနတေယျ။
တဈနေ့…လူနာရှငျးခြိနျ သူ့ဆီရောကျသှားတော့ သူနဲ့ စကားမြားမြား ပွောဖွဈတယျ။ ကြှနျတျောက
” ဆရာ့သူငယျခငျြးတှေ ဆရာ့ဆီမလာကွတော့ဘူးမလား…”
” ဆရာက ဆရာ့လူနာတှပေဲ အခြိနျပေးနတောကိုး…ဆရာ့အသိ
” တဈခုလိုခငျြရငျ တဈခုစှနျ့လှတျရမှာပေါ့ကှာ…ငါလုပျတဲ့အလုပျက ငါ့အတှကျရော အမြားအတှကျပါအကြိုးရှိတော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့
ဆရာ့စကားတှကေ မှတျသားဖို့ကောငျးတယျ။ဆရာက ဆကျပွောသေးတယျ။
” ငါက ဆရာဝနျတဈယောကျလကှော…ဆရာဝနျက ဆေးခနျးနဲ့လူနာ၊လူနာနဲ့ဆေးခနျးကို ထိတှဆေ့ကျဆံနတော မဆနျးပါဘူး….ဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈပွီး ကာရာအိုကဆေိုငျ သှားလိုကျ၊ ဘိလိယကျခုံသှားလိုကျ၊ ရုပျရှငျရုံသှားလိုကျ၊ အနှိပျခနျး
သှားလိုကျလုပျနရေငျ ငါက အမှိုကျဖွဈသှားမှာပေါ့…အမှိုကျဆိုတာ သူမြားတှေ စှနျ့ပဈတဲ့ အရာတဈခု၊အသုံးမဝငျတဲ့ အရာတဈခု၊တနျဖိုးမရှိတဲ့ အရာတဈခု…ဒါပမေယျ့ အမှိုကျဆိုတာ တကယျတော့ အမှိုကျမဟုတျဘူး…ရှိသငျ့တဲ့နရောမှာမရှိပဲ နရောလှဲနလေို့သာ အမှိုကျလို့ အချေါခံရတာ…”
” ဒီလိုလကှော…မငျး သနပျခါးလိမျးဖူးလား…”
” သနပျခါးက ပါးပျေါမှာလိမျးတာနျော…”
” ဟုတျတယျလဆေရာ…တဈခြို့မိဘတှကေတော့ သူ့ကလေးကို တဈကိုယျလုံးလိမျးပေးကွတယျ…”
” အငျး…ကောငျးပွီ…သနပျခါးကို ပါးမှာလိမျးတယျ ကိုယျမှာလိမျးတယျ…ဆံပငျမှာကော လိမျးလို့ရလား…”
” ကွံကွီးစညျရာ ဆရာရယျ…သနပျခါးကိုဆံပငျမှာလိမျးလို့ဘယျရမလဲ ဆရာရဲ့…မကျြနှာကိုသနပျခါးလိမျးလို့ ဆံပငျကိုသနပျခါးပသှေားရငျတောငျသုပျပဈကွတာပဲကို….”
” အဲဒါပွောတာ…သနပျခါးက သူ့နရောမဟုတျတဲ့ ဆံပငျပျေါ ရောကျသှားရငျ အမှိုကျအနနေဲ့ သုပျပဈခံရရော…ဒီလိုပဲ ခေါငျးလိမျးဆီလညျး ဆံပငျမှာမနပေဲ မကျြနှာမှာ နရေငျ အမှိုကျအနနေဲ့ သုပျပဈခံရမှာပဲ…”
” ဪ…ဒီလိုလား…ကြှနျတျောသဘောပေါကျပါပွီ…ဆရာ့အတှေး အရမျးကောငျးတာပဲ…”
ကြှနျတျော ခြီးကြူးလိုကျတယျ။သူတဈပါးကို အပွဈကိုထောကျပွတော့ မညျဆို လြှငျ၊သားသမီးကိုဆုံးမတော့မညျဆိုလြှငျ နှဈယောကျတညျး
ရှိတဲ့အခြိနျမှပွောသငျ့တယျ။သူတဈပါး သို့မဟုတျ သားသမီးကို ခြီးမှမျး တော့မညျဆိုလြှငျ လူပုံအလယျမှာ ခြီးမှမျးရမယျလို့ မှတျသားဖူးတယျ။
” ဒါနဲ့…ပွောရဦးမယျ…လူတှစှေနျ့ပဈနတေဲ့၊ဘာမှအသုံး မဝငျတဲ့အမှိုကျလညျး နှဈဆယျ့တဈရာစုမှာ နရောတဈခုရသှားပွီ၊တနျဖိုးရှိသှားပွီ….”
” ဘယျလို ဆရာ…”
ဆရာ့ရဲ့ ဒဿနဆနျတဲ့စကားတှကေို နားမလညျစှာနဲ့ ပွနျမေးမိတယျ။
” အခု လူတှစှေနျ့ပဈနတေဲ့ အမှိုကျကနေ လြှပျစဈဓာတျအား ထုတျနိုငျပွီလကှော…ဒါ အမှိုကျရဲ့တနျဖိုးပေါ့ကှ…ဒီတော့လကှော…
လောကမှာ အမှိုကျဆိုတာ မရှိတော့ဘူး…နှဈဆယျ့တဈရာစုမှာ အမှိုကျဟာ လောငျစာအဖွဈ တနျဖိုးရှိသှားပွီ…လူ့အကြိုးပွုလောငျစာအဖွဈ
ဆရာ့ရဲ့ စကားလုံးတှကေို တဈဘဝလုံး၊တဈသကျလုံး၊မသမေခငျြး အသုံးပွုသှားရမယျ့ အတှေးအချေါအတှကျ ငတျမှတျစှာ စားသုံးခဲ့တယျ။
” တကယျတော့ အမှိုကျဆိုတာ အမှိုကျမဟုတျပါဘူးဗြာ…”
Previous post အစ္စရေးရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ခြောက်ရက်စစ်ပွဲ
Next post ကမ္ဘာကျော် အန်ကောဝပ် ဘုရားကျောင်းကြီးအကြောင်းသိကောင်းစရာ